Minisiteran’ny asa sy ny asam-panjakana Mikatso tanteraka ny asa
Seranam-piaramanidina Ivato Sao dia tokony hakatona mihitsy aloha ?
Mampikolay ny mpandeha na teratany io na vahiny ny zava-misy amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Maro ny fitarainana mahakasika kolikoly, fanararaotana, fangalarana entan’ny mpandeha, filam-baniny,…
Sambo mpanjono Malagasy Giazan-dry “Gilets Jaunes” ao La Réunion
Ny zoma 15 febroary teo no tonga tao amin’ny seranan-tsambon’i Port Ouest ao amin’ny Nosy La Réunion ny sambo mpanjono Malagasy "Ile Sainte-Marie Tamatave"
Fanondranana Andramenan’i Madagasikara Nampanankarena firenena hafa
Tamin’ny fiandohan’ny taona 2009 no tena nampalaza ny fanondranana ny hazo sarobidin’i Madagasikara. Hazo sarobidy tahaka ny andramena sy voamboana an-jatony maro no tapaka isan’andro tamin’izany.
Tsy mbola misy miasa ireo mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy etsy 67 ha hatramin’izao, mikatso tanteraka ny asa.
Tsy misy na dia mpiandry raharaha (service minimum) aza mandra-pialan’ny minisitra am-perinasa Atoa Maharante Jean de Dieu, hoy i Yves Rakotonomenjanahary tompon’andraikitry ny serasera ao an-toerana. Mbola vao mainka hihamafy ny hetsika raha mbola Atoa Maharante Jean de Dieu ihany no averina ho minisitry ny asam-panjakana eo aorian’ny fivoahan’ny lisitr’ireo minisitra ao anatin’ny governemantan’ny firaisam-pirenena. Raha tsiahivina, antony maro no manosika ireo mpiasa eo anivon’ity minisitera iray ity hanala ny minisitrany. Ao ny hamaroan’ireo fianakavian’ity minisitra ity ao anaty minisitera, ny tsy fanajana ny fotodrafitrasa ao an-toerana … . Efa ho tapa-bolana mahery no nitokona ireo mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny asa sy ny asam-panjakana etsy amin’ny 67 ha ireo.